Isitolo sekhofi seRobot barista esihamba phambili esinomkhiqizi wekhofi econsayo kanye neFactory | I-Moton
Inombolo yemodeli: I-MCF031A
I-Robot barista coffee kiosk ene-drip coffee MCF031A ifakwe ikakhulukazi ingalo yerobhothi esebenzisanayo yasekhaya, umshini wekhofi ozenzakalelayo wase-Australia, umshini wokugaya ikhofi wase-Italy, i-Netherlands coffer temper kanye ne-Italian ice dispenser. Umzimba we-kiosk wamukela isakhiwo sensimbi yeshidi ngezinto ze-Q235B. Ihlinzeka ngezindlela ezintathu zokuxhuma inethiwekhi, i-4G, i-WIFI ne-Ethernet. Amafasitela angavulwa ngesandla ngenjongo yokugcwalisa kabusha impahla. Kudingeka amanzi ampompi kanye nezindawo zokudonsa amanzi. Ukugcwalisa kabusha impahla yakhelwe kabili ngosuku. Isiqhingi soku-oda sakhiwe ngokwehlukana ukwenza indawo ibe yindawo ezimele.
Imisebenzi ye-Robot barista coffee kiosk ene-drip coffee MCF031A
• Izinhlelo zokusebenza ezisekelwe ku-IOS ne-Android zi-oda ku-inthanethi.
• Ukwenza ikhofi okusetshenziswa izingalo zamarobhothi ngokuzenzakalela ngezinqubo ezimbili ezihlukene zokwenza ikhofi (umshini wekhofi owenziwe kancane nesihlungi se-drip yekhofi).
• Ukunyathelisa kobuciko bekhofi
• Ukusebenzisana kombono nokusebenzisana komsindo.
• Ikhiyoski ezungeze ukuqapha kwesikhathi sangempela ngekhamera.
• Isimo se-hardware yangaphakathi yekhiyoski yokuqapha ngesikhathi sangempela kanye ne-alamu yamaphutha.
• Inkokhelo ye-NFC
Amapharamitha we-robot milk tea kiosk
Amandla afakiwe 24kw
Ubukhulu (WxHxD) 5000x2400x1800mm
Umshini wekhofi Aremde
Ingalo yerobhothi U-JAKA Zu 3 no-JAKA Zu 7
Isikhathi sokwenza isiphuzo esimaphakathi imizuzwana eyi-100
Indlela yoku-oda Uku-oda kwesikrini sokuthinta kusayithi noma uku-oda kohlelo lokusebenza ku-inthanethi.
Indlela yokukhokha Inkokhelo ye-NFC (i-Visa, i-Mastercard, i-Google Pay, i-Samsung Pay, i-PayPal)
● Inhlanzeko nokuphepha
● Ubuchwepheshe nemfashini
● Izinambitheka eziningi zekhofi
● Izinqubo eziningi zokwenza ikhofi.
● Ukunambitheka kwekhofi okusezingeni eliphezulu
● Izinga elizinzile lekhofi
Okwedlule: Imfashini kanye ne-Elular Ordering Robot Receptionist
Olandelayo: Isitolo Sekhofi Esenziwe ngokwezifiso I-Robot Barista Coffee Kiosk
I-Barista Robot Price
I-China Robot Barista Price
I-Chinese Barista Robot
Robot Barista Price
I-Robotic Barista Intengo
I-Smart Robot Barista Intengo